"Waxaan u maleynayaa in dadku ay noqdaan kuwa waxyar ka roon": George Clooney wuxuu difaacay hooyada yar ee Meghan - WAA KU SAMEEYSA
ACCUEIL » kale "Waxaan u maleynayaa in dadku ay noqdaan kuwa waxyar uun jecel": George Clooney wuxuu difaacay hooyada yar ee Meghan
Waad ogtahay sida dadku! Halkii ay ugu farxi lahaayeen Meghan iyo Harry ku saabsan wiilkooda cusub ee Archie, taageerayaal badan ayaa “ku qanacsan” in Duchess of Sussex ay dhasho laba toddobaad ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin.
Markii Amiir Harry yidhi, "Qof kastaa wuxuu dhahyaa dhallaanka aad bay isu baddelaan laba toddobaad gudahood," dadku runtii way wareersanaayeen. Waxay bilaabeen inay maleeyaan: Archie labo toddobaad ayey lahaan doontaa? Si kastaba ha noqotee, waan ka xumahay inaan ka xumaano, Harry taas ayaa taas loogala jeeday dhallaanka wax badan ayaa isbeddela isbuucii hore ee 2 noloshooda. Dhab ahaantii miyaanay ahayn?
Posted by Duke iyo Duchess of Sussex (@sussexroyal) on May 8, 2019 at 6: 34am Magaadle
Fadlan sii xiiso badan!
George Clooney kama baqay inuu si cad u difaaco saaxiibkiis Meghan Markle. Horaantii, xiddigga liistada A wuxuu ka hadlay habka xun ee shabakadaha bulshada iyo dadku ay hadda u weerareen hooyada yar oo ay ujareeyaan nolosheeda.
Waxaa daabacay Esquire UK (@ukesquire) on May 2, 2019 at 4: 56am Magaadle
Clooney si daacad ah ayey u rajeyneysaa in dadku mustaqbal wanaagsan ku lahaan doonaan Meghan maxaa yeelay iyadu waa hooyadeed Archie hadda.
Waxaan u malaynayaa dadku waa inay noqdaan kuwa waxyar ka fiican. Waa gabadh da 'yar oo hadda dhashay ilmo, ma fahamtay?
Posted by Duke iyo Duchess of Sussex (@sussexroyal) on May 8, 2019 at 8: 39am Magaadle
Tusaale ahaan, dadku waxay bilaabeen inay ka yaabaan illaa iyo intee canugga uu noqon doono "madow" iyo inuu ku xukumo Meghan daacad la'aantiisii ​​ugu horreysay. Waa wax karaahiyo ah!
Waxaa daabacay Dr. Sarina Beasley (@ the.smiling.vagina) on May 10, 2019 at 4: 15am Magaadle
Tan iyo Duchess of Sussex waxay bartilmaamed ka ahayd xanta badan ee warbaahinta, George Clooney wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee difaacda saaxiibkeed.
Clooney miyuu noqon doonaa kafaala-qaade?
Uma badna. Sida laga soo xigtay waraysi gaar ah, xiddigga Qabo-22 shaaca ka qaaday inuusan diyaar u aheyn inuu noqdo aabaha dhalay Meghan iyo Harry cunugga.
Waxay noqon lahayd fikrad xun. Waxaan ahay aabbe mataano ah, si adagna waan ula tacaali karaa!
Posted by Duke iyo Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Apr 15, 2019 at 6: 51am PDT
Hagaag, dhammaanteen waa inaan sugnaa dhowr bilood ka hor inta Meghan Markle iyo Prince Harry ay ku dhawaaqayaan cidda noqon doonta awoowe iyo ilaaheey riyadooda ah Archie Harrison Mountbatten-Windsor.
Cameroon-CAN Egypt. Clarence Seedorf oo ka codsaday ciyaartoyda 2019